Baidoa Media Center » Degmooyin cusub oo kusoo kordhay gobolka Bay.
Degmooyin cusub oo kusoo kordhay gobolka Bay.
August 16, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Ayada oo uu dhawaanahaanba soo saarayay wareegtooyin uu degmooyin cusub ugusoo kordhinayay gobolada dalka Soomaaliya, ayaa uu madaxweynaha dowlada Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed soo saaray wareegto uu degmooyin hor leh ugu magacaabay gobolka Bay ee koonfurgalbeed Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa wareegto ku magacaabay degmooyinka Awdiinle iyo Labaatan Jirow ee gobolka Bay ayada oo ay dadka deegaanadaasna si weyn usoo dhaweeyeen arintaas.
Sida ay ilo lagu kalsoonaan karo u sheegeen shabakada warbaahinta baidoamedia.com arinta degmooyinkaan ayaa soo bilaabatay xiligii dowladii uu madaxweynaha ka ahaa Allaha u naxariistee Cabdullaahi Yuusuf ayada oo uu mudaba ka caga jiidayay magacaabista degmooyinkaan oo ay inta badan u dhanyihiin adeegyadii looga baahnaa degmo dadka ku dhaqana ay tiradoodu tahay mid weyn.
Degmooyinka cusub ee kusoo kordhay gobolka Bay ayaa la filayaa inay tirada guud ee degmooyinka gobolka Bay ka dhigaan sideed degmo.
Waxaa jiro deegaano degmooyin u qalma oo aan weli degmanimo loo aqoonsan sida deegaanka Ufurow oo ah deegaan leh inta badan adeegyadii looga baahnaa degmo islamarkaasna dad badani ay ku dhaqanyihiin.
Filo goor dhow wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha.